Zakha isimo imfihlakalo futhi zamaqhawe Ephakathi. ufasimbe esigubuzele eyimfihlakalo nobukhazikhazi, lezi zakhiwo ezinhle zezivakashi yesimanje ukubuyela kulezo endulo, lapho-Europe lalibuswa esabekayo izinduna, izindlalifa bobukhosi sobukhosi babefuna ukukhanya amakhosazana yayo enhle Knights elinesibindi bathunyelwa Ukuzula ezikude ukuhlangabezana izingozi ezintsha ezamehlela. izinqaba White zomhlaba ezikhanga nge yobuhle balo nokuhlala charm, ukumema izivakashi esidlule zomlando.
Omunye izinqaba amahle kakhulu emhlabeni. Isigodlo-tale wathola udumo crazy phakathi abahambi, imele kwezinhlansi emahlathini aminyene of the lwaseBavaria Alps. Lihunyushwe kwelesiHeberu elithi Neuschwanstein German kusho "itshe entsha dada." Lokhu motif feathery, ngasendleleni, kwakwande wonke izakhiwo - ezisukela umbala omhlophe izindonga ziphethe uphawu heraldic sohlobo endala Schwangau. Ukwakhiwa kuqhathaniswa "abasha": yayakhiwe ngasekupheleni XIX leminyaka.
Zonke izinqaba ezimhlophe imilingo Europe futhi okhazimulayo, kodwa Neuschwanstein kuyinto ukuhlukanisa ekhethekile, ikhubalo ezithile. I umhlobiso eyinhloko yonke Ensemble yezakhiwo - Cathedral isitayela Gothic - ayizange yakhiwe. Naphezu kwakho konke lokhu brilliance lwaya we esigodlweni musa fade. Njengoba kwase kukhona, uzoba kungagxilisa kithi ukumesaba umbukwane emangalisayo kwelanga kubonakala izindonga pearl, engena imisebe ocebile egumbini sobukhosi, ehlotshiswe eqoshiwe futhi tapestries. Enye Luhambo - sivale indlela engena emgedeni. Lokhu ikamelo fabulous, ayihlomele esitezi sesithathu, kubukeka sengathi kukhona umhume wangempela Ali Baba.
Akwaziwa Loire Valley, etholakala eduze Paris, idume ngomtapo izinqaba zayo emangalisa. Ezikhathini zasendulo, le ndawo amakhosi futhi enkantolo izikhulu esakhiwe ezweni ohlala kulo: bonke bangabafundi lapha emhlabeni 300. Kusukela mass jikelele izinqaba yasekuqaleni futhi emangalisayo Shamborn imele, ukwakhiwa zazo, ngokusho legend, wayebe nesandla uLeonardo da Vinci. Ngaphezu kwalokho, kuyinto lapha walithanda umhlalaphansi odumile wamafilimu Molière, owabhala ezindongeni esigodlweni hhayi yocezu olulodwa.
Yiqiniso, zonke sivala ezimhlophe baziwa zobuciko zabo ocebile zomlando nemibukiso. Kodwa Shamborne umhlobiso sangaphakathi lisebukhazikhazini balo futhi ezihlukahlukene design aphakeme nezinye zamakhosi. Lapha ungakwazi ukubona inqwaba imidwebo esibonisa izigcawu nokuphila Paris ekhazimulayo, nezigigaba eziningi Don Quixote futhi kukhanya yiziphazamiso ezihehayo ka-Andromeda. candelabra Antique ezindongeni, zemabula imihlobiso, indlwana ethokomele futhi kuvunguza izitebhisi baphathe izivakashi Yempucuko. pearl Ebukekayo waseFrance loke nje lidume ngokuthunga wonke izinja emhlabeni abazingeli, okuyinto eyenziwa njengoba ezikhangayo emahlathini aseduze futhi ezinsukwini zethu.
Uma kwenzeke uzithola ezweni Yenguquko, qiniseka ukuthi uvakashela amabandla amaningi nezigodlo etholakala lapha. Kulokhu libanakekele Italy sivala ekhethekile emhlophe. Njengoba yayinemibhoshongo ngemuva nangaphambili okwesibhakabhaka, izindonga zawo zamatshe, moats ezijulile, izingadi elimnandi - uyonikwa izivakashi kahle ukuthi bathanda. Kulokhu, umkhandlu wendawo ukubheka Miramar - iparele ogwini lwase-Trieste esigodini. Lesi sigodlo, ezakhiwe edwaleni projecting olwandle: kubonakala ukuthi abantu bayazithanda play emagagasini limele isihambi emva kohambo olude.
Lapha okwakuthandelene Renaissance ubuciko bokwakhiwa Gothic. Le nqaba, elakhiwa ngo-medieval isitayela Scottish, elingaphakathi yayo igcizelela ukusondela ngokushesha kwamanzi azure emanzini. A epaki, ihlukaniswe 22 esingamahektare, ubukhazikhazi abatelekile kanye angavamile. Ukulula ngokusebenzisa izindlela emazombezombe futhi izindlela ezibanzi, ungabona izithombe ze ngomusa, nemithombo egeleza, emigedeni ejulile, izihlahla engavamile futhi izitshalo ezingavamile.
Omunye izinqaba edume kakhulu kuleli zwe. Sabalalisa epaki olunothile emfuleni Dyje, ke sekuyisikhathi eside nakumasiko WaseYurophu a UNESCO sithuthukiswe Ukuvikelwa. Lednice sashiwo zemihla njengoba Ekuqaleni kwekhulu XIII. Uma kwaba impahla i umndeni endala Liechtenstein, manje kungokwalabo isimo, leli gugu bokwakha. Ifomu yesimanje lwesigodlo wanika umakhi abadumile Austrian Jiří Vingelmyuller: yena ehlotshisiwe olungaphambili lwesonto kwemibhoshongo crenellated, izinsika yinqaba, emoyeni yayinamakhothamo kanye balcony yesikhumbuzo.
Ukuze izivakashi kukhona evulekile Blue futhi Ukuzingela Hall, iKhabhinethi Chinese, suite Afrika kanye castle epaki nge esiyingqayizivele Palm House. Ngaphezu kwalokho, kamuva nje inombolo Kwatholakala iziphethu ezishisayo, ngesisekelo okuyinto ukwakha indawo yesimanje. Abantu bendawo kuze kube yilolu suku walondoloza zokupheka lasendulo Moravian iwayini, ngakho ngenjabulo isimemo izivakashi ukunambitha iziphuzo hhayi kuphela zewayini castle, kodwa futhi izimpahla ukukhiqizwa yayo siqu. Zonke ezimhlophe izinqaba Czech captivate izivakashi, kodwa singashi ngempela e Lednice ungakwazi shí esikhathini esidlule.
Sharovsky Palace (Kharkiv)
Yikuphi amazwe sivala elimhlophe? Yiqiniso, cishe kuwo wonke amazwe aseYurophu. Futhi-Ukraine - iyathinteka. Enyakatho-mpumalanga elise Chic Sharovsky Palace - brainchild of Leopold Keuning, ushukela inkosi yase Russia tsarist. Ukuze ubuhle nento yalesi sakhiwo wabiza "White Swan". I ezimbili storey neo-Gothic isakhiwo nesitayela has amakamelo amathathu esikhulu amakamelo 26. umnyango Front ehlotshisiwe nemibhoshongo ezicashile kanye yayinemibhoshongo ngemuva nangaphambili.
Njengazo zonke ezimhlophe izingidi, Sharovsky Palace lufrenyiwe ngumuntu epaki aluhlaza. Green Zone - brainchild of wezakhiwo Georg Georg Kuphaldt, owenza konke okusemandleni imizamo kanye nemali ilungiselelo zensimu. Ngaphansi kwesandla sakhe, ezingaphezu kwekhulu izinhlobo zezitshalo ezingavamile yatshalwa. Umvuthwandaba kwepaki kwaba Ilungiselelo lime, amagatsha awo zitholakala ngokungavamile izihlahla: zikhula thwi. Eduze enqabeni iyona Ushukela Hill. Inganekwane ethile ithi egqumeni sidalwe eyayenziwe ngesicelo unkosikazi umninindlu sika. Lapho yena wayefuna snowless ebusika toboggan, walaya ukumboza ushukela elinye lala magquma eliseduze.
Castle iWhite Heron (Japan)
Igama liyazikhulumela. Iklelisa izinqaba eliphawuleka kunawo wonke ezimhlophe zezwe, ingasaphathwa esigodlweni, ngomusa futhi ubeke izinto ngononina. Like inyoni evuka ngaphezu sezwe. Le nqaba lakhiwa endaweni esinqeni kaHarimi Hime. Lesi sakhiwo sinamagumbi 83 izakhiwo, amelela amehlo izivakashi ngokucophelela izindonga acakiwe, embrasures esongelayo futhi izintuba. Yakhelwe esigodlweni XIV ekhulwini isidlulile ngokuphindaphindiwe komunye clan Samurai, ngoba njalo feuds abangu kokubhubhisa Ensemble yezakhiwo lasendulo. Naphezu kwakho konke lokhu, nothayi banamuhla White Heron iye zalungiswa futhi wanezela izakhiwo ezintsha.
Emhlabeni esigodlweni lihlukaniswe enhle engadini Kuvunguza: labyrinths of eziklanywe meander amathrekhi, ukushayela izivakashi emhlabeni futhi ngokuqinisekile uzozala ekupheleni efile. Umklamo wayezelwe ngoba izitha ngenkathi ezulazula engadini emijondolo kuyo, onogada uzokwazi silungiselele ukuhlasela futhi umlilo evulekile. Trial by ukulwa Park futhi akazange kudlule ekupheleni ukwakhiwa eJapane kufika isikhathi esithile sokuthula ezweni lakithi.
White Izinqaba akuzona kuphela eYurophu nase-Asia, kodwa ngisho ezwekazini lase-Afrika. I ebukekayo kakhulu ayakhiwe ngu amaPutukezi e-Ghana e- le oGwini lwaseNtshonalanga, lapho ngesikhathi amatasa ukuhweba ngegolide nezinkuni. Ekuqaleni kwaba nje dabukisa Fort lokhuni, okuyinto eyaba ezimhlophe itshe castle emva kweminyaka hhayi nekhulu. Esikhathini sethu, ingaphansi eqeqeshwa we-UNESCO kungaqedwa.
Lesi sigodlo siqukethe izinqaba ezimbili. Kwelinye amaphiko eziningi emnyuziyamu, ogama ziphephile ukutshela umlando umzabalazo ezweni ezizweni ezazakhelene nawo ezazihlala futhi abanqobi European. Omunye amahholo lunikezelwe umlando wangaphambi wamakoloni yesifunda: lapha ungabona ngamathuluzi okuzingela, izinkemba zazingavumi kahle futhi bengenalo lwasendulo izikali ukukala amatshe ayigugu, futhi amathuluzi ngisho Afrika zomculo, bagwedla ngezikebhe nezinto ezingezinhle. Ukuze unikele kakhulu uhambo amakhaza of emihumeni, lapho eminyakeni eminingi edlule ayelapho ukufa irowu anemisila amathuluzi amaningi olunzima sokuhlushwa.
Cinderella sika Castle (USA)
Cha, lokhu akuyona esigodlweni lasendulo futhi isonto eziyinkimbinkimbi ephakathi. Naphezu yesimanjemanje yayo, akusona ngaphansi amahle kunamanye izinqaba ezimhlophe zezwe. Izithombe nezinye izithombe ukubukeka esigodlweni into engavamile: isakhiwo obusuka magic nobukhazikhazi we emakhulwini eminyaka adlule. Itholakala ku Walt Disney World abajwayele ukuvakasha kuyona e Orlando, okuyinto isikhungo omkhulu lokuzijabulisa emhlabeni. Yiqiniso, Ingxenye evelele luhlobo iyona Cinderella Castle, kanye nemibhoshongo yayo emide emincane, imibhoshongo eziwubukhazikhazi futhi izibani twinkling.
Lesi sakhiwo amamitha cishe 60 ukuphakama. Kodwa ke wasebenzisa iqhinga optical kwenza kube nakakhulu futhi okukhulu ngaphezulu. Ngokwesibonelo, ukuphakama Spire kuyinto kwesigamu endaweni Imininingwane, izakhi ekhoneni enwetshiwe ukuthi kubanga inkohliso of ibanga ukuphakama. I ezimhlophe castle nge imibhoshongo blue ufana inqaba ephakathi. UMdali eziyinkimbinkimbi, umakhi Herbert Ryman, wahosha imidwebo liphefumulelwe umbono kwezigodlo Okuyınqo, osekuvele eshiwo ngenhla. Lesi sakhiwo eba ubufakazi ukuthi esikhathini sethu, ungakwazi ukwakha castle grand futhi ebukekayo, kukhona intando nemali eyanele. Njengozakwabo bayo basendulo, Cinderella Castle - i gem lathumela, abathandwa izivakashi kanye nabahamba ohlonishwayo.
Imisipha esengxenyeni engaphambili yengalo, umsebenzi wabo
Ulwazi olubalulekile kubo bonke: ekwelapheni isifo samathambo onaso sibe